“Hadimada Garoowiyo, Hanaq-go’a Nugaaleed”
Halka aad tumaatiday
Waxa kaga habboonaa
Dar kaloo i howlee
Huqdaad reebtay weynaa
Hibasho iyo lur kululaa
Colka Bari haraatiyey (Qadaasame & Dhuudo)
Hubka Mudug ku talax tegey
Hakin buu u baahnaa
Hanaddada ku dabar go’ay
Himilooy u baahnaa”.
Hadraawi baa yiri. Yuu ku yiri? Anigu waxaan isleeyahay, maansadu waxay ku socotaa kornayl C/hi Yuusuf! Sabab? Haddee isagaa Garoowe iyo Nugaal dadkiisii caanka ahaa (hogaamiye dhaqameed) ku laayey. Colkee Bari haraatiyey oon kan C/hi ahayn? Soomaali indha-adayg kama dhamaado ee ha ii sheegeen sida C/hi Bari wax ugu dilay cidda ugu dishay? Gaalkacyo hadda dadku waa isku laayaa.
Waxaa kaaga sii daran dad dhan oo qaarkood sheegto hogaamiye-dhaqameedyo baa iska dabo-ordaya isaga ama iska aamusay oo godkooda biyo ugu galeen. Wuxuu u adeegsadaa siyaasaddii gumaysiga ee foosha xumayd: waa qaybi oo xukun.
Shalay dad buu inta kasoo aruursaday Nugaal, Mudug iyo Howd buu reer Qardho ku laayey. Maantana wuxuu rabaa inta reer Qardho soo wato inuu reer Garoowe (C/Raxmaan Faroole) kula dagaalo!.
Waxaa iigu darran niman isu qaba inay sumcad ku leeyihiin Puntland oo uu boorso ka dhigtay oo maalin walba sidii ay yihiin iskaalsooyinkiisii meeshuu cag dhigaba la dhiga! Wallee qof is dulleeya inaan cidna ka haybaysan.
C/hi horay buu Ilmo Abshir Nugaal uga cayriyey haddana wuxuu rabaa inuu ku daro C/Raxmaan Faroole laakiin si taasi u suurto-gasho waa inuu Cadde Muuse gacan ka helaa. Reer Qardho ma garan waayeen haddii dhib loo geystay inaysan iyaguna markooda cid kale dulmin oo C/hi caawin? Ma filayo oo nifaaqa Puntland ka jira baa sidaas ah, taariikhdaana markhaati ka ah.
Bal Hadraawi ood mooddo inuu Puntland ka hadlayo aan erayadiisa milicsano:
Wuxuu yiri degmadaya (Garoowe)
Dugsi kaliya baa jira
Diric kaliya baa dhiga (C/hi)
Dersi baanu baranaa
Dulliga iyo beentiyo
Inta laga diqoodiyo
Dewarsigu ka koowyahay
Digashadu u mudantahay
Marka qalin daraalaha
Dilla-sheega la cuskado
Imtixaanka loo dego
Kan dul dhiga jawaabtiyo
Inta daadata u badan.
Wuxuu yiri degmadayada
Dibnahaa la cunayaa
Qosolkaa la deexdaa
Adigoo il dabayaa
Dadku inaanay kaa garan
Misna lagu dedaalaa
Marka aad Duleedoow
Sidaad doonta weydaad
Sidaad diiday yeeshaa.
Dadka uu Ilaahay
Daa’in ka magan galo
Waaba lagu ducaystaa
Haddaannaan dagaal ridin
Ama ciidan soo dumin
Dawliil ku naalloon
Ama keenin daacuun
Ama daadad soo rogin
Jiilaal wax naga dilin
Dabo-dheer na salabeyn
Diigaanyo nagu dhaban
Miyaa daasadaha maran
Dirham noogu dhacayaa?
Ruuxii la duugaa
Marka laga dareeruu
Dib usoo dhashaayoo
Durba loo mashxaradaa!
Wuxuu yiri degmadayada (Puntland)
Ka hagrada ma-durugtada
Ayey geel u dirataa (nin Puntland wadi waayey, Soomaali ma wadi karaa).
Dibida iyo weylaha
Waxa dhala dameeraha!
Marka haddeer wakaas laleeyahay kornayl C/hi baa Garoowe tagaya, waxaana la ii sheegay inay isimo-ku-sheeggii meesha joogaan si loo dhiso dowlad ka kooban wasiiro iyo wasiir-ku-xigeenno. Wuxuu rabaa in isagoo “isimada isticmaalaya” uu dhisto dowlad uu raali ka yahay oo maqaar-saar ah isagoo isla markaas ka takhalusaya qofkuu rabo (C/Raxmaan Faroole).
Laakiin C/hi mid buusan xisaabta ku darsan: laga soo bilaabo Bari ilaa Mudug dadkii hadda bishimahay ruugayaan ciil dartiis kaliya waxay sugayaan wax howl-gasha. Waxaan maqaalka kusoo xirayaa isla erayadii Hadraawi:
Dareen waa ka siman tahay
Doogna wey gudboontahay
Doorna wey midoowdaa
Libna wey ku dirirtaa
Xilla wey daryeeshaa
Dad-qal wey ka adag tahay
Danna wey wadaagtaa
Duddadaa u kala rogan
Mana kala dab qaataan
Dadab baa kukala xiran
Digadana nin baa shiday
Dawaduu ku huriyaa
Rag inay ku damiyaan
Gaas bay ku darayaan
Meel daad u baahnayd.
Waxuu sii yiri:
Waxse jira Duleedoow
Dibirrooti kulul baa
Xaska lagula daatee
Dakharada la geystoo
Waa daanno culusoo
Rag iskaga dambeeyee
Waxaan dooddii kaga baxay
Hadalkana ku daa’ iri
Nin dab liqay Rashiidoow
Dhuxul buu ka daacaa
Ma darmaanta booddee
Ma daliilka muuqdiyo
Dhamac hoos ka darartoo
Dambas baan aqaannaa?
Halka deyr waqtigu dhigo
Dib baa looga sheekayn
Ka-daraa u magac bixin.
Marka wixii nagu dhaca innagaa ka mas’uul ah. Waxaan shaki lahayn, hogaamiye-dhaqameedkii ama magaaladii qaadata dulli maanta inaysan dib dambe uga baxayn.
F.G. erayada aan qoysaska geshay anaa ku daray ee maansada lama socoto. Waa uun tusaalayaal aan rabo inuu dadku arko. Teedaka kale maansadu sidaas usugama xigto, qaarkeedna waxaa loo sameeyey sidii labo qof oo is waraysanaysa.
QORAALDII HORE EE C/WAAXID
Faafin: SomaliTalk.com | June 25, 2004